Maalin: Janaayo 4, 2019
Duqa Magaalada İzmir Dowlada Hoose ee Magaalada Azar Kocaoğlu ayaa diyaariyay shaqo joojinta sida inZBAN. naxdin faahfaahinta kulankiisii ​​uu la qaatay shaqaalaha. Kocaoglu, oo ka careysnaa diidmada shaqaaluhu ay u aqbaleen dalabka, ayaa yidhi, siz Natiijada shaqa joojinta awgeed [More ...]
Guddoomiye Ku Xigeenka CHP IZBAN ayaa lagu soo bandhigay sababta Shaqaalaha aan loo Bixinin
In kasta oo shaqo-joojinta loogu talagalay xuquuqda shaqaalaha Izmir İZBAN, CHP Izmir kuxigeenka Tacettin Bayır, 'Tani waxay culeyska u saareysaa adduunka ganacsiga Aziz Bey. Qeybta gaarka loo leeyahay iyo shaqaalaha dowladda oo maqlayay kororkaan [More ...]
Nidaamka Radar ee lagu rakibay waddooyinka waaweyn ee Kosovo
Wasaaradda Altayapı waxay dhowaan ku rakibtay nidaamka radar kaameeraha ah wadooyinka waaweyn si looga hortago shilalka taraafikada ee sii kordha. Codsiga waxaa la bilaabi doonaa May. Wasaaradda Kaabayaasha dhaqaalaha, sida ku xusan heshiiska ay la gashay Dowlada Hangari, caqli badan [More ...]
Miyuu Ka Hortageynin Gaadiidka Barafka ee Bursa
Qeybta Gawaarida Degmooyinka Magaalada Bursa ee Gawaarida Gaadiidka, degmada 17 ee baaxadda leh dadaallada la dagaallanka barafka si loo furo wadada xaafadaha 73 ee xiran habeenkii, wali waxaa jira waddo xiran xaafad. Waaxda Gaadiidka [More ...]
Laacibiinta FIS waxay ka bilaabanayaan Gerede
Barnaamijka Activity Turkey Ski Federation 2019 iyo waxa uu ku yaalaa Run Ski abaabulay sanad kasta ku Tartamada Koobka International FIS lagu qaban doonaa degmada Bolu Geremi on January 5 6-2019. Gerede Arkut Skiing [More ...]
On Fire Tram ee Konya
Mashiinka qaboojiyaha ee Konya ayaa la sheegay inuu gubtay sababtuna tahay kuleylka. Isla markii ololuhu bakhtiyeen, taraamka ayaa loo jiiday joogsigii ugu dambeeyay. Marka loo eego macluumaadka la helay, dabka ku jira taraamka, waqtiga 00.15 [More ...]
RayHaber 04.01.2019 Warbixinta Shirka
Adeegga Nadiifinta Halkalı Dhismaha Xarumaha Adeegga Cuntada, Qeybinta iyo Adeegyada Kale Shaqada Dhismaha ee Samsun Khad Xadhig 99 + 630
Izmir Metro iyo Tramway
Shaqo-joojinta IZBAN ee Izmir waxay ka tagaysaa maalinta 25 maalinta oo shaqaalaha metro iyo taraamku waxay isu diyaarinayaan shaqo-joojin. Demiryol-İş Trade Union ayaa laga yaabaa inay ku dhejiso go'aanka shaqo-joojin labada goobood ee shaqada toddobaadkan. Shalay waxay lahadleen Aziz Kocaoğlu'yla Demiryol-Is [More ...]
Meeriyada Taariikhiga ah ee Besiktas
Xilli xabaalaha kurgan sanadlaha ah ee 5.500 ee laga helay qashin-qubka ee laga fuliyay degmada Beşiktaş ee Istanbul ayaa la arki karaa inta lagu guda jiro isticmaalka metrooga. Waxaa la helay inta lagu guda jiray qoditaankii xarunta metrooga ee Besiktas waxaana loo maleynayay in ay ka tirsan tahay bilowgii Dahabka Hore (3500-3000 BC). [More ...]
Qoraalkii bishii hore ee majaladda Raillife, Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa daabacay maqaalka "Sannadka 2019 wuxuu noqon doonaa Sannadihii Mashaariicda Waaweyn". Waraaqda ARSLAN EE CHAIRMAN Gool kasto 2023 [More ...]
Malkoçoglu Mehmet Bey Overpass La soo bandhigay
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii waddaa adeegyadda loogu talagalay gaadiid aan kala go 'lahayn oo xasiloon oo magaalada oo dhan ka shaqeeya. Dhismaha buundooyinka dadka lugaynaya sidoo kale looma dayacay si loo hubiyo badbaadada muwaadiniinta isgoysyada. [More ...]